Su'aal: Waxaan u raadinayaan hab si loo badbaadiyo fariimaha qoraalka ah ka iPhone oo dhan si ay u computer dambe arkaysid. Miyuu jiraa qof haysta ee la kulma ee fariimaha qoraalka ah iPhone badbaadiyo si toos ah u computer? Fadlan ii caawin!
Ma doonaysaa in lagu badbaadiyo fariimaha qoraalka ah ka iPhone in computer si lacag la'aan ah ilaa meel iPhone , sababta oo ah fariimaha qoraalka ah qaadan meel aad u badan oo ka mid ah iPhone? Dadka qaarkood ku xusan oo ay shaashadda ka mid ah fariimaha qoraalka ah oo muujinaya on iPhone. Sure, ay u shaqayso. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay SMS badan, waxa aad ku qaadataa waqti dheer si loo badbaadiyo fariimaha qoraalka ah ee iPhone. Dhab ahaantii, ma ahan sida ay adag tahay sida aad u maleyneyso in uu badbaadiyo fariimaha qoraalka ah ( fariimaha jacaylka ) on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s / 4 / 3GS sida file ah oo la akhrin karo kombiyuutarka. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in aad raacdo tallaabooyinka hoose.
Maxaa u baahan yihiin:
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka;
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa aalad desktop oo kaa caawin doona inaad badbaadin fariimaha qoraalka ah iPhone oo dhan si ay u computer sida faylasha akhrin iyo elekterikal. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad la'aan ah aad PC ama Mac Windows in ay isku day ah. Hadda Wondershare Dr.Fone ee macruufka (for Windows) iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) ayaa dhamaantood laga heli karo.
Haddii aad tan via iPad, iPod iPhone ama taabashada page booqanaya, fadlan u baddashaan kombiyuutar si ay u soo bixi Wondershare Dr.Fone ee macruufka in ay isku day ah.
iPhone Data Recovery - Save iPhone fariimaha qoraalka in Computer
Save fariimaha qoraalka ah ka iPhone inay ka kaaftoomi computer si xor ah,
Save iPhone fariimaha iyo lifaaqyada qoraalka sida HTML / XML / TXT files;
Taageerayaan iPhone: 6s iPhone (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iyo in ka badan >>
Fariimaha qoraalka ah dhoofinta iPhone in files elekterikal
Save iPhone fariimaha qoraalka si PC
Save iPhone fariimaha qoraalka si Mac
Tallaabada 1. Iska aad iPhone xiran computer Windows ah
Connect aad iPhone si aad u computer la cable ah digital. Markaas ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Haddii aad la isticmaalayo iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ama iPhone 4s, waxaad heli doontaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota.
Haddii aad isticmaasho iPhone 4 ama iPhone 3GS, aad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee ka duwan. Ha welwelin! Just raac waxa aad ku aragto shaashadda si ay u badbaadin fariimaha qoraalka ah ka iPhone in computer.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone fariimaha qoraalka ah waxa ay ku
Sida 6s ah iPhone (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s user, kaliya aad u baahan tahay si ay u riix "Start Scan" button on furmo suuqa si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal.
Sida lagu user iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoose si ay u galaan hab iskaanka qalabka ay u baarista iPhone:
1. Ku qabo iPhone oo guji "Start".
2. Qabo Xukun iyo badhamada Home waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
3. Fur button Power, oo xajiya Homebutton ku sii cadaadisay, ilaa aad u sheegay in aad ku soo gashay hab iskaanka si guul leh.
Ka dib marka aad sameyn tallaabooyinka kor ku xusan, barnaamijka si toos ah iskaan doonaa iPhone xogta ku yaal sida soo socota.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin fariimaha iPhone si aad u computer
Marka sawirka dhameystiray, dhammaan xogta ku saabsan iPhone waxaa laga heli doonaa oo soo bandhigay qaybaha. Guji "Messages" dhanka bidix. Waxaad ku eegaan kara waxa ku qoran oo ka buuxa threads oo dhan fariin, oo ay ku jiraan iMessages. Hubi this category oo guji "Ladnaansho". Waxaad badbaadin karo fariimaha ku iPhone si aad u computer hadda. Waa file ah HTML akhrin karo, oo wanaagsan u ilaalinteedu ama daabacaadda.
Haddii aad tahay qof user Mac ah, ka dib markii barnaamij ku saabsan Mac, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa xulashada habka soo kabasho. Si loo badbaadiyo farriimo ku saabsan iPhone, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ee "soo kabsado Device macruufka ah". Markaas xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka.
Marka aad 6s iPhone ah (Plus) xirmaan / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s in kombiyuutarka, barnaamijka wuxuu muujin doonaa sida soo socota:
Haddii aad isticmaalayso iPhone 4 ama iPhone 3GS, suuqa kala egtahay wax yar ka duwan.
Tallaabada 2. Ku bilow aad ka baareyso iPhone
Markaas, aad haatan iskaan kartaa iPhone. Wixii iPhone iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s, aad si fudud u riixi kartaa Start ee suuqa kala loo sameeyo. Wixii iPhone 4 / 3GS, aad looga baahan yahay inay soo galaan hab iskaanka iPhone ee si waxaa iskaan xogta aad ku yaal oo raac hoose.:
2. Qabo Xukun iyo badhamada Home isku mar ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
3. Fur button Power, oo xajiya button Home sii adkeeyey ka.
Marka aad u sheegay in aad soo gashay, sii daayo button Home ah. Barnaamijka ayaa iskaan doonaa iPhone si toos ah u xogta ku yaal.
Tallaabada 3. fariimaha qoraalka ah ee Save iPhone in aad Mac
Skaanka aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi. Ka dib markii in, aad sabab u scan heli doonaa sida soo socota. Dooro qaybta "Messages" bidixda. Waxaad ku eegaan kara waxa ku qoran buuxa oo waxaan iyaga ku badbaadin si aad Mac adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Jeclaada Messages Waa in aan ogaado
Sida loo Helo fariimaha qoraalka masaxay on iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka iPhone
Sida loo Delete fariimaha qoraalka ka iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Voice cadaymaha ka iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Notes ka iPhone
Sida loo Print fariimaha qoraalka ka iPhone
Waa maxay New ee macruufka 7.1
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Xiriirada ka iPad Mini
> Resource > iPhone > Sida loo badbaadi iPhone Text Messages